itshe carnelian, noma carnelian - mineral zemvelo amahle orange umbala. Akwaziwa kulokho zwi lalilihle ngegama lalo lamanje; Ososayensi basikisela ukuthi elithi "carnelian" sihlehlela emuva ngenkathi neRoma lasendulo futhi izwi Latin "inyama", "cherry" noma "Dogwood". Kunoma yikuphi kusobala ukuthi abantu basendulo bazama ukulingisa indlela umbala emangalisayo amaminerali egameni layo. Ezinsukwini oFaro abaseGibhithe egqoka carnelian ngesimo namasongo imigexo, ngokuqinile ekukholweni ikhono lakhe ubuyekeze umzimba ukuguga futhi unike amandla okuphila. Ngo umGibhithe "Incwadi Abafileyo" kuthiwa amaminerali orange kuyadingeka ukubeka amathuna oshonile ukuthi unikeze "zempi magic" ngenxa yokuphila ngemva kokufa.
Stone carneol has a trigonal crystal uhlelo futhi libhekene inani 7 Mohs ubulukhuni isikali (efana asebenza ngebhethri). He is red ezihlukahlukene chalcedony. Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi chalcedony shades esifanayo kuyasiza uyayidambisa intukuthelo nokuzola. amathoni Red kukhona ngenxa okuqukethwe eliphezulu yensimbi oxide.
Amatshe kungaba njengoba okumsulwa orange umbala, futhi inclusions yezinye shades of palette efanayo. Cishe carnelian engcono ethengwe kwelaseNdiya, lapho sivunyiwe ukubeka ngaphansi imisebe ngqo welanga ukuba ukucaciswa ukukhanya. Ngaphansi kwe-ultraviolet izingcezu brown zibomvu kanye orange.
amatshe eliphucuziwe ubukeke kahle futhi uzizwe of the izingcezu ingilazi.
ubunjalo elifanayo ezintweni eziphilayo
Carnelian - izakhiwo itshe lapho zihlobene ngokuqondile ukuzazi futhi emakamu obandayo. Kuyasiza umuntu ukuqeda ukukhathazeka ngenxa inhlebo nobandlululo umphakathi, kodwa futhi kwandisa ukuzethemba futhi ikuvumela ukuba bathuthuke abalulekile emsebenzini. Kukholakala ukuthi itshe carnelian uyakwazi sokunika umnikazi walo sesibindi, akayikhiphi ngesikhathi esifanayo ubudlova ezingadingekile nesihluku.
Carnelian ukuthuthukiswa lokusungula. It has esiyingqayizivele yokuhlanza izindawo, ikhono angasusa noma yikuphi uhlobo emandleni amabi nokuheha uketshezi omuhle. Lokhu amaminerali esiwusizo ngokukhethekile nabantu abanomuzwa wokuthi balahlekelwe ukulawula ukuphila kwabo. Uma unomuzwa wokuthi naphezu kwayo yonke imizamo yakho iya ku ukuchitha, nokuthi phambi alikho ithemba ukuze best, zama kaningi ngangokunokwenzeka ukugqoka ubucwebe noma izesekeli kusuka carnelian.
Akukho isithiyo esinjalo, okuyinto engazange kwaqeda umnikazi walo itshe carnelian (isithombe). Izakhiwo nokubaluleka amaminerali orange kusengaphambili Metaphysics yayo: bevula iminyango kanye nokunikeza amathuba okuba okuhle kunakho konke, kubhalansisa amakhono zokudala futhi yenhlangano, ayikuvumeli ukuba bachezuke amapulani. Uma nizizwa nesaba lapho nibhekene nomthelela ongemuhle kusukela ngaphandle, ukugqoka oniksi - livikela kho innermost cabango kusukela ilukuluku yomunye, futhi akukho bantu nobutha ngeke bakwazi ukunqoba isithiyo yayo evikelekile engqondo.
Sidinga isibindi nokuthembela Ugqozi
Uma omunye ukwesaba kwakho eziqine - ukukhuluma eningini, isidingo ukuba ethule inkulumo phambi kwesixuku esikhulu sabantu noma ngokumane siphaphamele-kubukwa, ebukisa ungakwazi ukuthenga carnelian zemvelo. Stone (izithombe ethulwa esihlokweni) akagcini ngokuba namandla ukuze ugqozi abantu yokudala futhi isibindi ezinhliziyweni labo esenziwa ubuntu babo uhlushwa ukuzinyeza futhi amahloni - kuyasiza nokuba ukuze kunqotshwe izithiyo ezingokwengqondo ukuthola inhliziyo namandla ezolile futhi ukuzethemba . Yingakho carnelian kubhekwa mascot ekahle yaseshashalazini kanye cinema abadlali.
izidakamizwa ezingavamile zokwenziwa Ungakwazi futhi kahle ukusekela impilo kunqandwe ukuthuthukiswa izifo ezifana amatshe zemvelo. Carnelian yanele ukuba isebenza kungxenye ngaphansi izimbambo ukuze kuqinisekiswe ukugaya olinganiselayo. I ubulili bubuhle lisetshenzisiwe pubic ithambo itshe imizuzu amabili ngosuku okudambisa ubuhlungu besisu nemvelo izifo zabesifazane. Ukusetshenziswa okunjalo carnelian kubalulekile ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe.
amaminerali Orange kunomthelela kwetinhlavu amangqamuzana amasha igazi futhi ngokuvamile asetshenziselwa ukwelapha ukopha yanoma yimuphi umsuka. Okuhle kunakho konke ukuthi kube amenable ukuvula amanxeba. amatshe sezinso, kanye nezinye izifo eziningi kwezinso, baqala kancane kancane chaza futhi sidlule, uma isiguli sifuna njalo lapho uhlangana nabo itshe ephulukisa. izinkinga kwemizwa, kuhlanganise ezinzwa babancwebe, izinhlobo eziningi rhinitis iguliswa futhi umkhuhlane kuthiwa abase bebaleka phambi magic of the carnelian zemvelo.
Kuyaziwa ukuthi carnelian kunikeza umzimba nge ubungqabavu ababelidinga kakhulu amandla ngokomzimba. Abanye abacwaningi bakholelwa ukuthi lesi impahla isuke ibangelwa ikhono itshe ukuhlanza igazi.
Umlingo kanye magic
Carnelian - itshe, izakhiwo imilingo okuyizona predetermined ubuhlobo obuphakathi asebenzayo amandla elanga. It kungokwalabo isici umlilo uhambisana amakhandlela orange lihlotshaniswa unkulunkulukazi ngesiGreki Isis kanye ungumnikazi amabutho ezinhlanu eziyinhloko. Lokhu Ukuvikelwa, ukuthula kwengqondo, bokukhuluma, ukuphulukisa kanye isibindi.
EGibhithe lasendulo, abantu babefaka busenga ezandleni carnelian ukunqanda intukuthelo yabo futhi kwehlise umhawu, umona nenzondo. Kufanele kuqashelwe ukuthi amaminerali futhi manje esetshenziswa ukuthi kuzoba nokuthula nobunye ukudamba melancholy nokucindezeleka.
Carnelian isetshenziswa ukubhekana gnawing ukungabaza nemicabango elimazayo ezimbi. Cupha izakhiwo eziyisisekelo amaminerali kungaba iziphonso ezifanele. Kwezinye izimo, inikeza ukubekezela, futhi ivikela esuka kubantu zokufuna ke umnikazi okubi. Ngenxa isihlangu okuthembekile ngokumelene okubi zokuthambekela kobuntu, carnelian ayikuvumeli ukuthi liphazamisane imicabango engaphakathi ivimbe ngempumelelo noma imuphi umzamo wokuthola yokulutha.
Phakathi Renaissance, itshe carnelian ngokuvamile ehlotshiswe ezibaziweyo zamaqhawe, izinkemba kanye nezinye izikhali bladed. Lezi iziphandla egqokwa entanyeni, ngosizo lwabo ezivikela ngokumelene magic kwanoma yiluphi uhlobo. Ngezinye izikhathi carnelian igcinwe endlini, ukuze evikelwe umndeni nekhaya kusukela umbani, iziphepho nokuzamazama komhlaba. Kukholakala ukuthi itshe orange enganikanga izindonga ukuze ugoqe. Ngaphezu kwalokho, lokho kuvimbela neso elibi futhi spoilage, nakuba nginikeza zabanikazi inhlanhla.
Njengentelezi ka carnelian kufanele ahlanze zonke izinsuku ezingamashumi amathathu. Ngokuvamile it is ngigeze ngamanzi afudumele ukugijima futhi kwaphela isikhathi esithile kwesokunxele elangeni, ukuze aphinde abekwe icala energy oqondile ovela iplanethi enamandla. Gqoka kubalulekile ukuze amaminerali uyaqhubeka wathinta isikhumba elingenalutho.
Ngenhloso zokwelapha liyasetshenziswa amanzi sard. Ukulungisa itshe ngihlaliswa umkhumbi emanzini ethafeni ebusuku.
Gcina oniksi, kanye nanoma yimuphi omunye namanye amaminerali, ukuze kungathatha vibes zazo ezimbi.
Kuyasiza ukugqoka imihlobiso ezenziwe carnelian zemvelo ukuthuthukisa okuhlushwa, futhi unikeze ngokucacile engqondweni. Ukhuthaza nokuqedwa becabanga imicabango emibi futhi okungalungile eziba khona phakathi nenkathi ukulungiselela ukuzindla nokuzibonela ulola nomuntu ngaphakathi ucabangisisa. Abasekeli yokwelapha Ouija ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze abalandeli bakhe isakhiwo ezimangalisayo has itshe carnelian. Kanjani kweseshini ukusetshenziswa yayo? I amaminerali Ufakwa izikhungo energy amasimu, ukuhlinzeka yesondlo okuqhubekayo yokuxhumana kwawo ekuphileni esidlule ukuphindukuzalwa, bese uqale ukuhlehla session ukuphindukuzalwa. amasu afanayo asetshenziselwa travel emaphusheni bayazi, ukususa emibonweni okwakwenzeka futhi ahlinzeke ukuthi kunokuhlobana okukhulu phakathi astral futhi ukwazi kahle. Ngaphezu kwalokho, carnelian ngokuvamile lisetshenziselwa ukucinga nokuthola "amawele" ngokomoya.
Njengoba kuboniswe ngenhla, ilanga uwukuphela nendikimba ethile esemkhathini ukuba elingelakwaJuda carneol-itshe. Izakhiwo, Isibonakaliso kutisondzeta kuthomba ngezinye izikhathi iba nempilo yomuntu kufundvwe isayensi esoteric umkhuba wokufundwa kwezinkanyezi. Ngokwesiko kubhekwe oniksi netshe lokukhubekisa Taurus noLeo.
Nakuba lezi ziyingi ewumngcingo, wakhetha ukunika ezithile itshe ngokwemvelo abantu abazalwa enyangeni ethile, carnelian akuyona kuhlobane ngokuqondile noma yiziphi izinyanga zomnyaka. Nokho, abanye abacwaningi bakholelwa ukuthi umhlobiso ubuhlalu orange kuyoba isipho umhlabeleli owazalwa ngo May, June, July noma Agasti - Cishe ngenxa yokwanda umsebenzi solar ngesikhathi sasehlobo. Luck nempumelelo ngeke oniksi, esethulwa eMihlanganweni Yesigodi ethi lokuzalwa nesikhombisa.
Nakuba leli tshe is ngokwesiko elihlobene ne izimpawu Leo futhi Taurus, angakwazi ukuphefumula yokuphila bangene ukoma alabo abazalwa ngaphansi uphawu Aries, Gemini noma Virgo.
Chakra futhi carnelian
Izici itshe, izithombe, kanye nohlobo lwamathekisthi lapho ingahlolwa kunoma iyiphi iforamu mayelana Metaphysics, isuke isebenza kakhulu ngesikhathi Chakra inkaba futhi le plexus elanga. Kuyasiza umuntu ngokomoya uxhuma kabusha nge ngokwakho futhi abone kanyekanye zonke izinzwa eziyisisekelo ezinhlanu ukuze uthuthukise ubulili, ikhono zokuzala, self-ukwaneliseka futhi lokusungula.
Akukholakali kodwa kuyiqiniso
Akuwona wonke umuntu uyazi, kodwa nokho carnelian kanye Izakhiwo ezilandelayo:
kwandisa umsebenzi wocansi futhi ikuvumela ukuqeda ukwesaba izakhiwo, kusongela evamile ekuphileni ngokobulili;
Lokho kwenza Awakening yamakhono ezifihliwe futhi ithuthukisa endaweni lokusungula umuntu;
It ikuvumela ukuba nazi izwe lakho siqu elingaphakathi.
Ngisho noma carnelian asisebenzi namaminerali yakho ngabanye ngokuhambisana ngenyanga lokuzalwa noma uphawu zezinkanyezi, egqoke ubucwebe ezenziwe kulokhu kwaziswa kuzosiza ukuba akwazi ukunqoba izingqinamba amahloni isihluthulelo sokukhuluma obala futhi ngiyoba nethonya elihle ku-ukwenza i-yoga nokuzindla.
Imbali Engaqondakali Engaqondakali Zamioculcas, amabika nasekukholelweni ezeni
Okunezinhlobonhlobo: incazelo nezibonelo
Ubuhlobo Family. Ngubani isihlobo esiseduze